Vahaolan’ny fanjakana tokana ve ny drafi-pandriampahaleman’i Trump ao Afovoany atsinanana? · Global Voices teny Malagasy
Vahaolan'ny fanjakana tokana ve ny drafi-pandriampahaleman'i Trump ao Afovoany atsinanana?
Voatsikera ho 'hanihany' sy 'henatra' ilay planina
Voadika ny 17 Febroary 2020 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Ελληνικά, Italiano, Svenska, English
Bethlehem dia tanàna Palestiniana miorina ao afovoan'ny Morondrano Andrefana, Palestina, atsimon'i Jerosalema, 9 Oktobra 2016. Saripikan'i Dennis Jarvis via Flickr CC BY 2.0.
Tamin'ny talata 28 janoary 2020 ny filohan'i Etazonia Donald Trump no nanambara ny drafi-pandriampahalemany nandrasana efa hatry ny ela malaza amin'ny hoe “deal of the century” [fifanarahan'ny taonjato]. Io drafitra io dia mametraka fanjakana Palestiniana [manokana] ary mampanantena an'i Jerosalema ho renivohitra tsy mizarazara an'i Isiraely.
“Ao anatin'ny fahantrana sy ny herisetra ny Palestiniana, hararaotin'ireo mitady hametraka azy ireo ho vatom-panorona hampandrosoana ny fampihorohoroana sy ny ekstremisma. Mendrika fiainana tsara kokoa ry zareo,” hoy i Trump nandritra ny kabariny tamin'io talata io.
Araka ny planin'i Trump, rehefa mifanandrify [mifameno] amin'ny tadiavin'i Isiraely ihany ny tadiavin'ny Palestiniana vao mety ho tontosa ny fananganana ny fanjakana Palestiniana. Efa maro ny Palestiniana nitsipaka sahady ny planina talohan'ny nanambaràna azy.
Ka ahoana ilay drafi-pandriampahalemana vaovao?
Tafiditra ao anatin'ny planina ny “sarintany ara-tsirinkevitra” mampiseho ireo zaratany (mila) ifanekena narafitr'i Isiraely handraisana fanjakana Palestiniana. Araka ny BBC, nampian'i Trump fa io sarintany io “dia mampitombo avo roa heny ny zaratany palestiniana ary manolotra renivohitra palestiniana ao Jerosalema atsinanana.” Hanokatra ambasady ao amin'ny “fanjakana Palestiniana vaovao” i Etazonia.
“Tsy misy Palestiniana na Israeliana ho esorina amin'ny tranony,” hoy i Trump tao amin'ny kabariny. Nampiany fa mbola hitoetra ireo fanorenana jiosy any Morondrano Andrefana (Cijordanie amin'ny teny frantsay) bodoin'i Israely — izay tsy ara-dalàna araka ny lalàna iraisampirenena —.
Nolazainy fa “hisokatra sy tsy hokarakaraina ao anatin'ny efa-taona” ny zara-tany natokana ho an'ny Palestiniana. Mandritra izany efa-taona izany ny Palestiniana “afa-mandinika ny fifanarahana, miady varotra amin'i Isiraely, ary mamita ireo fepetra mampijoro azy ho fanjakana,” araka ny BBC.
Farany, “Hiasa miaraka amin'ny mpanjakan'i Jordania i Isiraely mba tsy hisy na inona na inona hokitihina fa hotandrovina ny fikajiana ny toerana masina malaza ao Jerosalema fantatry ny Jiosy ho Tendrombohitry ny Tempoly ary fantatry ny Miozolomana ho al-Haram al-Sharif,” araka ny BBC.
Manamafy ny planina fa tokony hijanona amin'ny toetrany ny fanasarahana sisintany hita maso amin'izao fotoana izao eo amin'i Israely sy i Palestina ary izany no hoheverina ho sisintany eo amin'ny “fanjakana roa tonta.” Efa ampolony taona maro izay i Etazonia no niezaka ny hanelanelana an'i Isiraely sy i Palestina hanangana ilay fantatra ho “vahaolan'ny fanjakana roa” izay samy miaina mahaleotena ny Israelita sy ny Palestiniana.
Ao amin'ny Twitter i Shahed Amanullah mampitaha ny drafitr'i Etazonia amin'ireo toerana nametrahana ny vazimba tompotany tao Etazonia:
Tsy mitovy amin'ny fanjakana mihitsy izao fa mitovy amin'ireo toerana nametrahana ny vazimba amerikana
Taorian'ny fanambaràna, nilaza ny Ambasadaoron'i Etazonia ao Isiraely, David Friedman, fa malalaka i Isiraely hibodo tany vaovao.
Ora maromaro taty aoriana, nanambara tao amin'ny Twitter i Jonathan Urich, mpitondratenin'i Netanyahu, fa hiangavy ny kabinetra ny praiminisitra hanohana ny fanovanana tanteraka ireo fanorenan'ny voanjo ao Morondrano Andrefana amin'ny alahady.
Ny sioka manaraka no haneho ireo fiovana nandritra ny fotoana maro eo amin'ny haben'ny tany ao Palestina manoloana ny fanorenan'ny voanjo Israelita:
Tsy manaiky ny kajy (matematika) ny OLP
‘Kivazivazy,’ ‘fitaka,’ ‘henatra’
Nijoro teo akaikin'i Trump nandritra ny fanambaràna ny praiminisitra Israelita Benjamin Netanyahu izay voampanga ho nanao kolikoly ao Israely. Samy tsy nanatrika kosa ny Ambasadaoron'i Ejipta sy Jordania — ireo firenena Arabo hany manana fifanarahana fandriampahalemana amin'i Isiraely.
“Manolotra hirika win-win [samy mahazo tombontsoa] ho an'ny roa tonta izao drafitra izao, vahaolana fanjakana roa azo tanterahana tsara izay mamaly tsara ny filaminan'i Isiraely amin'izay fanjakana Palestiniana mijoro,” hoy i Trump nandritra ny kabariny.
Antsoin'ny mpamakafaka ara-politika Marwan Bishara ho “fananihaniana” ny drafitra ao amin'ny Twitter, satria samy voampanga any amin'ny firenena misy azy avy na i Trump na i Netanyahu ary manao izay hamialiana ny fifantohana any amin-javatra hafa. Raha nanambara ny drafi-pandriampahalemany i Trump, tany amin'ny Senà miady amin'ny fanakanana (impeachment) azy kosa ny ekipam-piarovantenany. Mandritra izany fotoana izany, na ora vitsivitsy mialoha izany fotsiny, voalaza tamin'ny fomba ofisialy fa voampanga ho nanao kolikoly i Netanyahu.
Ny fanombanako voalohany amin'ny ‘drafitra fandriampahaleman'i’ Trump : Ny Fananihaniana, ny fitaka ary ny faharomotana
Voatsikera mafy ho fanasoniavana ireo fibodoan-tany tsy nifampierana nataon'i Isiraelita ny drafitra.
Oviana ny fotoana farany nahavitana fifanarahana momba ny ankolafy fahatelo ka tsy tao anatin'ny mpanao fifanarahana ny ankolafy fahatelo?
Miantso ny isian'ny fifampiresahana mampiditra ny ankolafy rehetra mba hisian'ny fifanarahana ireo fanjakana Arabo. Mandritra izany fotoana izany ny Fitondram-panjaka an'i Jordania bukaza fa ny fananganana fanjakana mahaleotena an'i Palestina ihany no lalan-tokana mankany amin'ny fandriampahalemana ao amin'ny faritra.
Te-hahalala hoe henatra sy fitaka tsy hitondra na oviana na oviana mankany amin'ny fandriampahalemana ity “adivarotra faratampony” ity? Manazava ny [fifanarahan'ny taonjato] i Omar Badddar